Ny filôzôfia dia mivazivazy mba hahatakatra ny tena sy ny fahalalana
Ny filôzôfian'ny fisainana dia saha manankarena ho an'ny vazivazy satria ny hatsikana be dia be momba ny maha-olona ny maha-olombelona ary ny fahasamihafana eo amin'ny fahalalana ny zavatra avy any ivelany ary ny fahafantarany izany avy ao anatiny (izany hoe avy amin'ny fomba fijery samihafa ). Ireto misy zavatra vitsivitsy.
The Parrot Silent
Lehilahy iray mahita basy any amin'ny mpivarotra biby fiompy ary manontany hoe ohatrinona ny vola.
"Eny e, mahafinaritra izy, hoy ilay tompony," noho izany dia tsy avelako handao azy noho ny latsaky ny $ 100. "
"Hmm," hoy ilay lehilahy, "izany hoe kely izany. Ary ahoana ny momba ilay zana-trondro misy azy? "
"Oh, matahotra aho fa hanatsara kokoa ny teti-bolanao", hamaly ny tompony. "Ity orinasa ity dia mivarotra $ 500."
"Fa!" Hoy ny reny. "Ahoana no mahatonga ny turkey amin'ny avo dimy heny noho ny vidin-tsoavaly raha toa ka afaka miteny ny boloky ary tsy mety ny turkey?"
"Eny," hoy ny tompon'ny fivarotana. "Marina fa afaka miteny ny boloky ary tsy mahavita ny turkey. Saingy ny trondro toy izany dia zava-mitranga miavaka. Izy no filozofa. Mety tsy hiresaka izy, fa heveriny!
Ny vazivazy eto, mazava ho azy, dia ny hoe ny filazana momba ny fahaiza-manaon'ny turkey dia tsy azo lavina satria tsy maneho ny tenany amin'ny fomba rehetra azo jerena ampahibemaso. Ny fitiavan-karena amin'ny endriny rehetra dia manjary tsy miraharaha ny fitarainana toy izany. Ao amin'ny filôzôfia ao an-tsainao, ny endrika ara-pihetseham-po mafy dia ny fitondrantena. Ireo mpifaninana dia mitazona fa ny lahateny rehetra momba ny toe-tsaina ara-tsaina "manokana", "ao anaty", dia tokony ho azo ampiasaina amin'ny fanambarana mikasika ny fihetsika mahazatra (izay misy ny fihetsika fiteny). Raha tsy azo atao izany, dia tsy azo ovaina ny fitarainana momba ny toe-tsaina anatiny, ary noho izany tsy misy dikany, na farafaharatsiny tsy misy siansa.
F: Ahoana no fiarahaban'ny mpitandro filaminana iray hafa momba ny fitondrantena?
A: "Mahatsiaro tena toy ny ahoana ianao?"
Ny teboka eto dia ny fihenan'ny fitondran-tena rehetra ny foto-kevitra ara-tsaina rehetra hanoritsiana ny fomba fitondran'ny olona. Manao izany izy ireo noho ny fitondrantena, tsy mitovy amin'ny eritreritry ny olona sy ny fihetseham-pon'ny olona, ​​dia hita ampahibemaso.
Ny ampahany amin'ny antony manosika hanao izany dia ny fametrahana mari-pahaizana siantifika bebe kokoa - na farafaharatsiny ny siansa "mafy" tahaka ny fika sy ny simia izay mifototra tanteraka amin'ny fisehoan-javatra tranga. Ny olana anefa, farafahakeliny, raha oharina amin'ny mpitsikera momba ny fitondrantena, dia ny fahafantarantsika tsara rehetra fa tsy karazana fitondrantena fotsiny isika. Isika dia manana fahatsiarovan-tena, fahaiza-mamaky, izay antsoina hoe "inscape". Mba handavoana izany, na handà fa ny fahafahantsika mahazo azy io dia mety ho loharanom-pahalalana (ohatra ny momba ny fahatsapantsika) dia tsy misy dikany. Ary mitarika ho amin'ny karazana absurdity nalaina tamin'ny fifanakalozana teo aloha.
Ankizivavy efa-taona no tonga nihazakazaka nanatona ny rainy ary nitazona ny lohany.
"Inona no tsy ampy, tantely?", Hoy ilay ray aman-dreny voakasik'izany.
Eo anelanelan-tsokosoko, manazava ilay tovovavy fa nilalao niaraka tamin'ny zanany lahy iray volana sivy volana izy rehefa noraisin'ilay ramatoa tampony ny volony ary nisintona mafy.
"Tsara izany", hoy ny rainy, ireny zavatra ireny dia tsy maintsy hitranga indraindray. Hitanao, tsy fantatry ny zazakely fa rehefa manintona ny volonao izy dia manimba anao.
Mankahery, ilay zazavavy dia miverina any amin'ny garderie. Saingy minitra vitsy taty aoriana dia misy zavatra hafa mitomany sy mitabataba.
Tonga dia nahita ny zava-misy ilay raim-pianakaviana ary hitany fa ity zaza ity no mitomany.
"Fa inona ny raharaha miaraka aminy?" Hoy izy nanontany ny zanany vavy.
"Oh, tsy misy zavatra, hoy izy. "Izao vao fantany."
Ny olana mahazatra amin'ny filozofia maoderina dia ny fahafahako manamarina ny finoako fa ny olona hafa dia manana traikefa mitovy amin'ny ahy. Ny sangisangy dia mampiseho ny zava-misy manan-danja fa ity dia finoana izay azontsika mialoha amin'ny fiainana. Ny zazavavy dia tsy isalasalàna fa mitovy amin'ny azy ny zaza. Mety hilaza zavatra momba ny fomba hahatongavantsika amin'izany finoana izany koa isika. Ny mahaliana, izay lazain'ilay zazavavy amin'ny farany dia mety ho diso. Ny zazakely dia mety mahafantatra fotsiny fa ny rahavaviny dia nanao zavatra teo amin'ny lohany izay nalahelo. Mety ho ampy hanajanona azy hanongotra ny volony amin'ny hoavy izany. Saingy tsy ho ela loatra izany, alohan'ny handehanany miala amin'ny faniratsiràna ny volo vava ary manaiky ny fanazavana ankapobeny ny antony tokony hialany.
Ny mpihaza iray dia mihazakazaka amin'ny ala raha sendra tampoka ny bera. Izy no mitifitra saingy diso. Ao anatin'ny segondra, ny bera dia eo aminy. Maka ny basy izy ary mamaky azy roa. Avy eo dia manosotra ilay mpihaza izy.
Ilay jiolahy dia mazava ho azy fa tezitra. Roa andro taty aoriana dia niverina tany anaty ala izy niaraka tamin'ny basy mahery vaika. Mandritra ny andro dia miady ho an'ny orsa izy, ary manaloka ny oram-baratra. Satria mikasa ny fiampangana azy. Indray mandeha dia nitohy ny tifitra. Miverina indray ilay bera ary manapotipotika ilay basy ary mamono ilay mpihaza.
Ankoatra ny fahaverezany, ilay jiolahy dia niverina indray ny ampitso niaraka tamin'ny AK 47. Taorian'ny fikarohana iray hafa dia hitany ny orsa, fa amin'izao fotoana izao kosa ny fiarandalamby rehefa mikasa ny hitifitra ilay biby mitaiza. Ny bera indray no manapaka ny fitaovam-piadiana ary manipy azy. Saingy amin'ity indray mitoraka ity, raha tokony haka ny fahalalahana mahazatra, dia mametraka ny tehiny eo amin'ny sorok'ilay lehilahy izy ary miteny amim-pahamendrehana hoe: "Aoka isika samy hanao ny marina. Tsy tena mihaza izany, sa ahoana? "
Ity dia vazivazy mahatsikaiky. Ny zavatra iray mahaliana azy io anefa dia miankina amin'ny fahatakaran'ilay mpihaino hoe ny teny mavesa-danja dia miresaka momba ny antony manosika sy faniriana. Hatramin'ny Freud, ny ankabeazan'ireo dia ekena amin'ny ankapobeny. Saingy tamin'ny andron'i Descartes, ny hevitra izay azonao ananana hevitra, finoana, faniriana, ary antony izay tsy fantatrao dia ho heverin'ny maro fa tsy mahaliana. Ny saina dia heverina ho mangarahara; Na inona na inona "ao" dia azo fantarina mora foana sy dinihina amin'ny alalan'ny fandinihana lalina.
Noho izany, tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy ny taonjato faha XVII, angamba ny sangisangy mety ho lavo.
Ny fahafatesan'i Descartes
Ny filozofa frantsay frantsay Rene Descartes no malaza indrindra amin'ny fanambarany, "Heveriko fa izany no izy." Nataony ho antoka ny fiandohan'ny filozofia manontolo. Ny tsy dia fantatra loatra dia hoe maty tamin'ny toe-javatra tsy mahazatra izy. Nipetraka tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray izy indray andro raha nanatona azy ny mpandroso sakafo, kafe teo an-tanana.
"Te-hisotro kafe bebe kokoa ve ianao?", Hoy ilay mpitsabo.
"Tsy mieritreritra aho," hoy i Descartes namaly --- ary poezia! . . . Nanjavona izy.
Inona no atao hoe fitiavan-tena etolojika?
Inona no dikan'ny hoe Nietzsche rehefa nilaza izy fa maty Andriamanitra?
'Karazan'ny Devoly sy Tom Walker'
Tokony hino ve ny zatovo kristianina?
Ireo teôlista feminista
Inona no fiandrasana bisikiletana?
Fanavakavahana sy Deviation Standard
Tantara sy endriky ny Choy Li Fut Kung Fu
15 mahomby ho an'ny indostrian'ny fandrindrana
Sekolim-barotra tsara amin'ny taona iray amin'ny Programan'ny MBA
Ilay Rainao any Afrika
Volana isam-bolana (v / v%)
Torohevitra momba ny fitondran-tena
Ryces Ryder Cup: Firy ny Afobe Afo, Iza no Voalohany?
Famerenana tanteraka: Ny 2008 Suzuki Boulevard C109R sy C109RT
Fanampiana ho an'ny olona manevateva
Nahoana Isika no Mampiasa Euphemisme?
Toro-tongotra mitazam-pandehanana eo amin'ny Nitro RC
10 Zava-danja lehibe ho an'ny famokarana vaovao momba ny kalitao
Ny torolalana momba ny andro firavoravoana Jiosy 2015-16
American Idol Season 15 Top 5 Mpifanaraka
Fepetra takiana amin'ny ambaratonga sekoly ambaratonga faharoa
Ricci v. DeStefano: raharaha iray momba ny fanavakavahana?
Ahoana no ahafahan'ny Professional Certificates mitsambikina-Manomboha ny asanao
Fetin'ny reny ho an'ny Papa kristiana
The Preposition French 'Entre': Ahoana ny fampiasana izany
University Statistics of Statistics Statistics
Introduction to French Articles-Articles français